Famakafakana ny adim-panahy sy ny finoana ary fanantenana tao amin' i Joba | Madagascar features website
Wednesday, August 1, 2012 - 14:00
Ny Bokin' i Joba dia iray tarika amin’ireo karazan-tsoratra atao hoe ny « fahendrena », mitovy karazana amin' ny Bokin’i Mpitoriteny sy Ohabolana.
Ny toko voalohany sy faha-2, - izay filazan-tantara miendrika fitarihan-teny, - ao ny fototra iorenana sy iankinan’ny teolojian' ity Bokin'i Joba ity.
Ny toko sisa manaraka, izay anatrehana ny adihevitr' i Joba sy ireo sakaizany ary andrenesana ny valin-tenin' i Jehovah ihany koa, dia tsy hafa fa fanamarinana sy fanamafisana izany fototra teolojika asandratra ao amin’ny bokiny izany.
Ireto misy hevi-dehibe telo azo dinihina ao amin’ny bokin’i Joba :
Ny amin'ny fijalian' ny marina
Nomen’Andriamanitra alalana hamely izay rehetra fitahiana eo am-pelatanan' i Joba satana, fa ny ainy tokana ihany no tsy navela hokasihiny.
Koa dia ripaka tanteraka ny fananan’i Joba rehetra, mbamin’ny zanany rehetra, ary ny vatan-tenany dia azon’aretin-dratsy.
Eny fa hatramin' ny vadiny aza dia nandatsa azy; ary nifandimby nananatra azy ny namany efa-dahy, ary samy nilaza fa matoa nisy izao dia satria tsy maintsy misy fahotana miafina nataony.
Nanamarina ny tenany i Joba, ary tsy izany ihany fa nitady hifandahatra amin’Andriamanitra mihitsy izy.
Andriamanitra anefa dia niteny taminy tao anatin’ny tafio-drivotra ka nanainga azy hamaly fanontanaina momba ny namoronana ireo zava-mahagaga eo amin’ny zava-boahary (Joba:38-41).
Tsy nahavaly na dia indray mandeha aza i Joba ka niaky fa sahy hifandahatra amin’ Andriamanitra kanefa tsinontsinona ny tenany.
Izany fireharehana izany no fahotan’i Joba ka nibebahany taty afara.
Hita ao amin’ity boky ity fa ilay olona manan-karena sy sambatra teo amin’ny fianakaviany no indro fa niharan’ny fahoriana faran’izay nangirifiry tokoa : ny fananany rehetra mbamin’ireo zanany dia rava tanteraka tao anatin’ny indray andro monja ; ary izy tenany dia nokapohina tamin’ny vay ratsy izay tena nampangirifiry azy.
Ny foto-kevitra efa notazonina hatrizay dia mihevitra ny fijaliana ho valin’ny fahotana natao. Io foto-kevitra io no entin’ireto sakaizan’i Joba telolahy ireto mananatra azy.
Fa « matoa nozoin’izany zavatra izany i Joba », hoy izy ireo, dia noho ny fahotany (ampitahao amin' ny. fiheveran' ny Jiosy ao amin' ny Lio:13:1-5 , Jao:9:2-3 ).
Kanefa hita amin’ny valin-tenin’i Joba fa tsy dia ny fijaliana mihatra aminy loatra no nametraka olana taminy ; fa izay tena mafy taminy kosa dia ny fomba famalian’ Andriamanitra ny marina, dia ny hoe : « nahoana izaho olo-marina no mijaly ? »
Hita eto ihany koa fa lavin’ Andriamanitra ny hevitr’ireo sakaizan’i Joba telolahy, tsy noho ny fahadisoan-kevitr’izy ireo (satria ny hevitr’izy ireo dia tena marina ara-teolojia tamin’izany fotoana izany), fa noho ny hevitr’izy ireo kosa mametra (manisy fetra) an’ Andriamanitra (Joba:42:7).
Koa ity boky ity dia mitory ny fahalehibeazan’ Andriamanitra, ny maha-izy Azy an’ Andriamanitra, izay manana fikendrena manokana amin’ny mpanompony.
Hita fa lehibe lavitra noho ny fahoriana nentin’i Joba ny navalin’ Andriamanitra azy tato aoriana.
Tsy nahazo valinteny momba ny anton' ny fijalian’ny marina i Joba , fa ny fanehoan’ Andriamanitra ny voninahiny dia ampy nampibebaka azy. Ny fahendren’Andriamanitra hita eo amin’ny zava-boahary, izay nandresy lahatra an’i Joba, ka nahatonga azy hibebaka noho izy nitady hifandahatra tamin’Andriamanitra
Ny tena valin-teny ny amin' ny fijalian’ny marina dia ny hazo fijalian’i Jesosy, izay nanavotany ny fahotan’izao tontolo izao, ary ny hazofijaliana entin’ny Mino tsirairay, izay fanadiovana ny finoantsika.
satana ( = ny mpiampanga) dia tsy manao afa-tsy ny miampanga ny Mino eo anatrehan’Andriamanitra.
Ny Mino kosa dia manana Mpiaro, dia Jesosy, ka rehefa miankina amin’i Jesosy isika fa tsy manamarin-tena dia azera avy any an-danitra satana (Lioka:10:18; Apokalipsy:12:7-9) .
Read more about Ny amin'ny fijalian' ny marina
Ny momba ny “fijalian’ny marina” (souffrance du juste)
Fitiavana maimaimpoana an’Andriamanitra
Araka ny totali-kevitry ny Soratra Masina dia anisan’ny zava-dehibe sy fototra iankinan’ny fahatanterahan’ny Didin’ Andriamanitra ny fitiavana Azy amin’ny fo sy ny fanahy ary ny hery rehetra, izay takiana amin’ny mpino Jiosy sy Kristiana (Deo:6:5; Mat:22:37; Mar:12:30; Lio:10:27).
Fitiavana madio sy maimaimpoana tsy miankina amina fepetra sy antony manokana, toy ny tombotsoa sy voninahitra ary fiadanana antenaina ho azo ho tambiny no takian’Andriamanitra amin’ny olony amin’izany. Fitahiana sy fanomezana maimaimpoana tsy miankina velively amin’izay fahamendrehantsika hahazo izany fa miankina amin’ny fahasoavany sy famindrampony noho ny fitiavany antsika hatramin’ny voalohany kosa no atolotr’Andriamanitra ho an’izay tia Azy.
Hita soritra mazava tsara ao amin’ny tantaran’i Joba ireo foto-javatra lehibe roa mifamaly sy mifandray ireo: Joba tia an’Jehovah maimaimpoana tamin’ny fony sy fanahiny ary ny heriny rehetra; Jehovah kosa, Izay efa tia an’i Joba hatramin’ny voalohany, dia nitahy azy maimaimpoana noho ny famindrampony sy fahasoavany. Ary dia nahafaly sy nahafapo an’Jehovah tokoa izany fahamboniana sy fahadiovan’ny fitiavan’i Joba Azy izany (Joba:1:8).
Araka izay asongadin’ny mpanoratra eto amin’ny boky anefa dia tsy neken'i satana ho marina izany naha-maimaimpoana ny fitiavan’i Joba an’Jehovah izany. Heverin'i satana mantsy fa tsy misy olombelona ho afaka sy hahay ho tia an’Andriamanitra maimaimpoana fa matoa tia an’Andriamanitra ny olona dia tsy hafa izany fa ho tambin’ny fitahiana sy tombotsoa antenainy na koa efa noraisiny taminy. Ary dia nokilasian’i satana ho anisan’izany i Joba (Joba:1:9).
Noho izany dia nanao fanamby tamin’Jehovah satana fa raha hesoriny tamin’i Joba ireo fitahiana niavosa teo aminy ireo dia hotafintohina izy ka handà an’Jehovah; ary dia hiharihary fa fitiavana tambin’ny fitahiana sy tombotsoa azony no nitiavan’i Joba an’Jehovah fa tsy maimaimpoana ve1ive1y, araka izay noheveran’Jehovah sy niderany azy (Joba:1:11).
Natoky ny fahamarinan’ny fitiavan’i Joba Azy Jehovah ka dia nomeny alalana (Permission Divine) i satana hizaha toetra ny maha-maimaim-poana na tsia io fitiavana filamatra io (Joba:1:12). Ary dia izay no antony anehoan’ny mpanoratra mazava tsara amin’ny 1-2 ny momba an’i Joba sy ny toetrany teo anatrehan’Jehovah ary ny adi-hevitra tamin’Jehovah sy satana sy ny fampahoriana mahatsiravina rehetra nataon’i satana ho fizahan-toetra ny fahadiovan’ny fitiavan’i Joba an’i Jehovah.
Raha mandresy amin’ny fizahan-toetra i Joba, i.e, raha tsy miala amin’ny fitiavana maimaimpoana an’Jehovah izy na dia hihatra amin’ny ainy aza ny fizahatoetra, dia hahazo voninahitra Jehovah fa ho afa-baraka kosa satana. Raha resy kosa i Joba, i.e, raha mia1a amin’Jehovah miaraka amin’ny fialan’ny hareny sy ny fiadanany ny fitiavany an’Jehovah, dia ho afa-baraka Jehovah fa hahazo voninahitra satana ary i Joba ho lasa mpanompony.
Faran’izay nangidy tokoa ny nahazo an'i Joba tamin’izany fizahatoetra nave1a nihatra taminy izany satria nendahina an-keriny taminy avokoa izay rehetra sarobidy taminy: ny hareny, ny zanany ary ny fahasalamany sy ny fiadanany. Namparin’i satana sy nampiasainy tamin'i Joba avokoa ny herin’ny haratsiany sy ny fahaizany mampahory ka ny ainy tokana tokoa, araka ny hafatry Jehovah, no sisa tsy nesoriny taminy (Joba:2:6).
Hatramin’ny vadin’i Joba aza dia nampiasain’i satana ho fandavoana azy (Joba:2:9).
Toy izany koa ireo sakaizany 3 lahy (meilleurs amis) tonga namangy sy nampahery azy, araka ny fanazavana hirosoana manaraka izao.
Tsara marihina dieny izao anefa fa nivoaka mpandresy tamin’ireo fizahan-toetra nivaivay rehetra ireo i Joba satria na toy inona na toy inona fiatraikan’izany tamin’ny ankohonany sy ny tenany dia tsy mba nandà an’Jehovah sy tsy niala taminy izy na dia iray vehana aza.
Raha lazaina amin’ny fiteny hafa dia nandresy tanteraka i Joba satria vao mainka nampiharihary sy nanamafy orina ny fitiavany maimaimpoana an’Jehovah, izay tsy niova, ny namongoran’i satana izay rehetra noheveriny ho antony niankinan'izany fitiavany izany.
Voalaza mazava tsara ao amin’ny Joba:2:l0b fa tamin’izay rehetra nihatra taminy dia tsy mba nanota tamin’ny molony (i.e, tsy niteny ratsy an’Jehovah) araka izay nantenain’i satana i Joba.
Raha nilazana izy fa ringana ny fananany sy ny zanany rehetra dia vonton’alahelo tokoa sy nisaona izy kanefa kosa mazava ny teniny feno fitiavana sy fanajana an'Jehovah, hoe: “Jehovah no nanome ary Jehovah no nanaisotra; isaorana anie ny anaran’Jehovah” (Joba:1:21).
Toy izany koa, raha nanakivy sy naka fanahy azy hiala tamin’Andriamanitra noho ny vay ratsy nanenika ny tenany ny vadiny dia hoy Joba hoe: “Moa ny soa ihany va no horaisintsika avy amin’Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa ?” (Joba:2:10a).
Mazava amin’ireo valintenin'i Joba ireo fa tsy niankina velively tamin’ny zavatra ivelany, izay azo omena azy sy esorina taminy, na koa tamin’ny toe-javatra soa sy ratsy, izay mpifamahofaho sy mpifamadibadika amin’ny fiainan-janak’olombe1ona, ny fitiavan'i Joba an’Jehovah fa niankina tanteraka tamin’ny fony sy ny ainy, izay efa natolony feno sy tsy nisy fepetra ho an’Jehovah. Izany no maha-maimaimpoana io fitiavany an’Jehovah io.
Marihina fa noho ny fanandratana io fitiavana maimaimpoana an’Andriamanitra ao amin’ny bokin’i Joba io no mahatonga ny teolojiana Protestanta maro milaza azy ho mpisava làlana ny teolojian’i Paoly Apostoly momba ny fitiavana sy fanompoana maimaimpoana ny Tompo, izay naharesy lahatra an’dry St Augustin ary nohamafisin’i Lotera tamin’ny reformasiona notarihiny.
Ny “fitiavana mamaimpoana an'Andriamanitra omban' ny fanarahana sy fanompoana Azy tsy mila tambiny” no toetra tiany hananatsika sy ifandraisantsika aminy. Araka izany dia azo ampifamenoina amin’ny Isaia ny bokin’i Joba.
Read more about Fitiavana maimaimpoana an’Andriamanitra
Ny “adin' ny tsara sy ny ratsy” (dualisme)
Ny amin’ny “Fitiavana maimaimpoana an’Andriamanitra”.
Ny adim-panahy nanjo an' i Joba :
Tsy hitan’i Joba izay mba ifandraisan’ny hevitr’ireto telolahy sakaizany ireto amin’ny toe-pinoan’i Joba, satria tsy mba hitany izay tsininy na izay fahotany ka hahamarina ny hevitr’ireto sakaizany.
Tamin’ny voalohany dia hita fa tena nitana mafy ny fitiavana an’ Andriamanitra sy ny fahatsaran’ny fitondrana azy i Joba (Joba:2:10).
Kanefa niova tsikelikely niandalana izany fahatokiany an’Andriamanitra izany, arakaraka ny toe-javatra natrehiny. Nalaim-panahy izy hihevitra fa efa tsy tia azy intsony Andriamanitra, dia izy izay olona marina, saingy novelezin’ Andriamanitra tsy ahoan-tsy ahoana (Joba:16:11-17).
Dia inona intsony àry no hianteherany ?
Ny fahamarinany ve ? Fantany tsara anefa fa tsy misy olona ho marina velively eo anatrehan’ Andriamanitra, ary tsy manan-kalahatra eo anatrehany (Joba:9:2-3).
Dia hiantehitra amin’ny finoany ve izy ? Kanefa moa ve mbola tafatoetra amin’ny finoany an’ Andriamanitra, izay heveriny ho mihaza ny ainy ihany izy ? (Joba:10:13-17 ; Joba:13:24)
Dia hita ary fa tsy misy zavatra ao amin’ny tenany izay azony antenaina.
Farany, ny hany iandrasany fanampiana dia Andriamanitra irery ihany, ka eo anatrehany no hametrahany ny adiny (Joba:13:3), na dia tsy miraharaha azy akory aza Andriamanitra (Joba:13:15).
Kanefa Andriamanitra iza ? Ilay Andriamanitra heveriny fa manao haza lambo ny ainy ve ? sa iza?
Ny fanontaniana lehibe teo anatrehany dia ity : Ahoana moa no mbola inoako an’Andriamanitra raha izaho olona marina aza no mijaly ?
Ao amin’ireo toko roa voalohany dia mazava ny valin-tenin’i Joba, fa mafy orina ny finoany (Joba:1:21-22 ; Joba:2:10).
Saingy kosa, manerana ny ady hevitra ao amin’ireo toko sisa rehetra dia niovaova izany toetry ny finoan’i Joba izany :
a. Niseho ny Famoizam-po : Joba:3:11-13 ; Joba:6:8-10 ; Joba:7:15-21.
b. Nisy ny fanoherana an’Andriamanitra sy fiarovan-tena : Joba:13:15 ; Joba:27:5-6 ; 29 ; 31 (v.35).
c. Mbola tao ihany anefa ny finoany : Joba:14:7-12, Joba:13-15 ; Joba:16:18-22 ; Joba:17.3 ; Joba:19:25-27.
Amin’ny farany dia Andriamanitra ihany no namonjy an' i Joba, ka resy satana, ary ireo sakaizan’i Joba dia nanarina mafy ary lasa i Joba indray no nifona ho azy ireo (Joba:42:7-8).
Ary farany dia nohavaozina indray ny fiainan’i (Joba:42:9-17).
Job:19:1-6 : Lavin’i Joba ny fanomezan-tsiny azy
Tsy noho ny zavatra nataony no nahatonga izao taminy, fa avy amin’ Andriamanitra kosa. Ny hevitr’ireo sakaizan’i Joba dia ny hoe : « efa nanota tokoa i Joba matoa nozoin’izao zavatra izao » (cf. Lio:13:1-5 ; Jao. 1-3).
Ireo izay noheveriny ho mpampahery sy mpampionona azy kosa ity no indro fa vao mainka koa aza manampy trotraka (fahoriana azy) (and.2-6 ; cf. Gen:31:7, Gen:31:7:41 ; Nom:14:22 ; Neh:4:6 ; Job:18:8 ; Job:22:10 ; Ohb:9:12 ; Gal:6:5).
Job.19.7-22 : Andriamanitra no mamely an’i Joba
Tsy noho ny zavatra nataon’i Joba no nahatonga izao taminy, fa avy amin’ Andriamanitra kosa. Ary tsy noho ny fahalalany resaka tao an-danitra no nahafantarany izany, fa fanomezan-tsiny satria tena mijaly loatra izy.
Marina fa tena avy amin’ Andriamanitra tokoa izao loza manjo an’i Joba izao, kanefa ny antony nanaovan’Andriamanitra izany no tsy mazava aminy, ka miteraka ny fanomezan-tsiny an’Andriamanitra. Angamba tsy ho nanome tsiny an’ Andriamanitra izy raha nahalala ilay resaka tao an-danitra. Saingy kosa ampoizina fa tsy hiteraka finoana na fampaherezana ho azy ny fahalalany ny anton’izany fikapohan’Andriamanitra azy, fa vao mainka kosa aza hiteraka famoizam-po tanteraka ho azy.
Fombantsika olombelona ny te-hahafantatra ny anton’ny zavatra mitranga iray, na dia tsy misy atao aza hamahana izany!
Io koa no fanontanian’ilay mpanompo mijaly ao amin’ny Sal.22.1-2 hoe: « Nahoana? »
Ny tena hevitr’i Joba dia izao: Efa nampiditra izao loza mahatsiravina izao taminy Andriamanitra, ary heveriny fa fahavalon’ Andriamanitra izy. Ka Ilay Andriamanitra nitokiany ihany no tompon-kevitra amin’ny fampijaliana azy (and.7-12 ; cf. Job.14.7 ; 17.15 ; 22.11 ; 29.14 ; 33.10).
Mbola Andriamanitra ihany koa no heverin’i Joba ho loharanon’ny fandavan’ny fianakaviany azy.
Kanefa hita eto ny fitalahoan’i Joba sy ny fiangaviany amin’ireto havany ireto mba hamindra fo aminy (and.21-22).
Ny fianakaviany sy ny sakaizany mbamin’ireo vahiny tao aminy aza dia nandositra azy avokoa, noho ny fijaliany (and.13-22 ; cf. Job.16.8 ; 7.5 ; 33. 21 ; Sal. 38.12 ; 41.10 ; 55.14 ; 69.9 ; 88.9,19).
Joba 19.25-27 : Ny Fanantenan’i Joba
Fanantenana manjavozavo (Job.14.7-12,13-15)
Tamin’ny teny navalin’i Joba an’i Elifaza teo aloha (7.9) dia hoy izy : « tahaka ny rahona misava ka levona, dia tahaka izany koa, izay midina any amin’ny fiainan-tsy hita tsy mba hiakatra intsony ». Mbola ilay teolojia hindrahindraina ao amin’ny Salamo sy Ohabolana ary Mpitoriteny no tazoniny amin’ izany, dia izao : any amin’ny fiainan-tsi-hita no hiafaran’ny manan’aina rehetra (Sal.102.23-26 ; Mpit.3.18-21).
Eto amin’ny 14.7-12 anefa izay valin-tenin’i Joba an’i Zofara, dia toa efa miova izany heviny izany, na dia tsy mivantana aza. Ny hazo, hoy izy, raha kapaina dia mbola misy fanantenana (14.7-9) ; dia toy izany koa ny olona raha maty (14.10-12).
Hoy ny and.12 hoe : « mandra-paha-tsy hisian’ ny lanitra sy ny tany, dia tsy hahatsiaro izy na ho fohazina amin’ny torimasony », dia toa te-hilaza hoe « aorian’ny hahafoanan’ny lanitra (sy ny tany) dia hofohazina amin’ny torimasony izy », fa alohan’izany dia tsy mbola misy azo atao.
Hita ihany koa fa maminany ny amin’ny hahafoana ny lanitra sy ny tany ny Testamenta Taloha, ary toy izany koa ny hampisy ny lanitra sy tany vaovao (Gen.8.22 ; Sal.89.29 ; 102.26 ; Isa.51.6 ; 65.17 ; 66.22).
Mazavazava kokoa izany eo amin’ny Job.14.13-15, fa lazainy ho toeram-piafenana fotsiny ny sheola, ary misy fetra ny anjarany ao amin’ny fiainan-tsy hita. Hoy i Joba : « Raha maty ny olona, moa ho velona indray va izy ? Raha izany dia hiandry mandritra ny andro fanafihako aho mandra-pahatongan’ny fahafahako (fiovako) ».
Hita ao amin’ireo andininy ireo fa manomboka mihamazava ny fanantenan’i Joba. Ny fanantenany eto dia izao : tsy maintsy ho faty izy (cf. 7.7,21 ; 16.22), nefa hisy fetrany izany ; ka tsy tsy mangataka ny hisakanan’ Andriamanitra ny fahafatesana intsony izy.
Ao amin’ireo Salamo fitarainana, ny fivavaky ny ory izay mandoatra ny alahelony eo anatrehan’Jehovah ao amin’ny mpanao Salamo dia miangavy an’Andriamanitra hisakana ny fahafatesana tsy hihatra aminy (Sal.102). Ny mampiavaka an’i Joba eto dia ity : na dia ho faty aza izy, dia mino fa ho fotoana voafetra no haharetany ao amin’ny fiainan-tsy hita : « Dia hiantso Hianao, ary izaho hamaly Anao ; ary mba halahelo ny asan’ny tananao Hianao ».
Tsy mbola maneho ilay finoana ny fitsanganana amin’ny maty anefa izany ; fa ny fanantenany kosa dia miorina amin’ny herin’ Andriamanitra irery ihany izay mety mbola hahatsiaro azy amin’ny fomba tsy mazava aminy !
Hita eto ny fifanalaviran’ny fanantenan’i Joba sy ny fanantenan’ny kristiana ny amin’ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty. Fa mazava tsara izay iorenan’ny finoan’ny kristiana fa fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty, ka hanangana amin’ny maty koa izay rehetra mino (1 Kor. 15)
Ny Vavolombelon’i Joba (Job.16.18-22)
Valin-tenin’i Joba an’i Elifaza indray ny eto amin’ny fihodinana faharoa amin’ny ady hevitra, ka manomboka ho mazava kokoa hatrany ny fanantenan’i Joba, na dia mandentika azy ho tsy mahalala an’Andriamanitra hatrany aza ireo sakaizany (15.4-6 ; 18.21). Ka hoy izy : « Fa na dia ankehitriny aza, indro any an-danitra ny Vavolombeloko ; eny, ny Vavolombeloko (= SaHâDiY) dia any amin’ny Avo » (and.19). Asehon’i Joba fa misy vavolombelona afaka hanaporofo ny fahamarinan’izay ambarany ny any an-danitra.
Paoly Apostoly koa nilaza toy izany, ka miantso an’ Andriamanitra ho vavolombelony : « Fa Andriamanitra Izay Tompoin’ny fanahiko amin’ny Filazantsaran’ny Zanany, no vavolombeloko fa… » (Rom.1.9 ; 9.1 ; 2 Kor.1.23 ; Fil.1.8).
Ahariharin’i Joba fa tsy meloka izy : « tsy misy eto an-tanako izay nalaina an-keriny ; ary madio ny fivavako » (and.17) ; ary ny vavolombelony amin’izany dia tsy olombelona ety an-tany intsony, fa « any an-danitra »
Mazava ny hevitr’i Joba eto fa Andriamanitra no vavolombelona hanamarina azy fa tsy meloka izy.
mety ho ny anankiray amin’ireo zanak’ Andriamanitra voalaza ao amin’ny 1.6 ; 2.1 io vavolombelon’i Joba io; na koa mety ho Anjely, araka izay nolazain’i Eliho eo amin’ny 33.23-34.
Hita koa ao amin’ny 1 Mpanj. 22.19-23 fa toa nifampidinika tamin’izy ireo Andriamanitra tao an-danitra. Ny sasany amin’izy ireo anefa dia ny hiampanga ny olom-boafidin’ Andriamanitra ihany no asany (cf. Zak.3.1-2). Koa raha izany dia tsy tokony ho ireo anjely ireo no vavolombelon’i Joba, satria lazainy eo amin’ny 16.21 fa « afaka hanamarina azy » io vavolombelony io ; ka noho izany dia tsy Iza Izy io fa tsy maintsy ho Andriamanitra tenany ihany, izay antsoiny hoe Eloah eo amin’ny 19.26.
Manana Mpiantoka i Joba (Job.17.3)
Mametraka ny ainy manontolo hiantohan’Andriamanitra i Joba, ary io dia manambara fa mbola matoky sy mino an’Andriamanitra ihany izy, na dia fantany aza fa Andriamanitra no loharanon’ izao fahoriany izao. Lavitra an’i Joba ny hamoy fo ka handao an’Andriamanitra, araka ny hevitry ny vadiny terỳ aloha.
Mino ny fitsanganana amin’ny maty i Joba (Job.19.25-27)
Ny hoe Goela :
Ny teksta eto dia miresaka ny fanantenan’i Joba ny amin’ny hitsanganany amin’ny maty.
Tena ny fitsanganana amin’ny maty tokoa, araka izay iheverantsika kristiana izany ankehitriny, ve no ao an-tsain’i Joba amin’izany ?
Sarotra ny hamaly indraim-bava izany fanontaniana izany, fa mitaky ny handinihana akaiky ny hevitry ny hoe « …raha izaho dia fantatro fa velona ny Mpanavotra ( = Goela, Mpanavotra : and.25) sy ny hoe « hahita an’Andriamanitra ; eny izaho no hahita Azy » ( = ‘eLôaH : and.26).
toa manjavozavo ihany ny fahitan’i Joba an’Ilay Andriamanitra heveriny fa Mpanavotra azy (7.21 ; 14.15), sady toa antsoiny handroaka Ity Anankiray mampijaly azy ity (cf.16.12-14). Ny mpitana izany hevitra izany dia te-hampifanohitra an’Andriamanitra amin’ny Tenany.
Rehefa dinihina ny tohin’ity perikopa ity (and.26), dia fantatra fa ny Goela eto dia manondro an’i Eloah ( = Andriamanitra).
Joba dia miantso an’Andriamanitra ho Mpitsara azy (13.15-18) ; ho Vavolombelony (16.19) ; ho Mpisolovava hanamarina azy (16.21).
Tsy eto amin’i Joba ihany no ahitana izany fomba fiteny izany, fa hita ihany koa ao amin’ny Salamo :
- « Hatòny ny fanahiko, avoty izy ; eny, vonjeo aho noho ny ataon’ny fahavaloko » (Sal. 69:18) ;
- « Tsarovy ny Fiangonanao izay efa azonao fahiny, ilay navotanao ho firenena lovanao… » (Sal.74.2) ;
- « Namonjy azy tamin’ny tanan’ny mpandrafy Izy, nanavotra azy tamin’ny tanan’ny fahavalo » (Sal.106.10).
Hita koa ao amin’ny toerana maro ao amin’ny Isaia ny hoe « Jehovah no Mpanavotra » :
- « Velomy ny hoby ry fitoeran-drava any Jerosalema… sady efa nanavotra an’i Jerosalema » (Isa.52.9) ;
- « Izaho no hamonjy anao, hoy Jehovah, ary ny Iray Masin’Israely no Mpanavotra anao » (Isa. 41.14) ;
- « Izao no lazain’ny Mpanjakan’Israely, dia Jehovah Tompon’ny maro Mpanavotra anao :Isa. 44.6) ;
- « Koa miverena amiko fa efa nanavotra anao Aho » (Isa.44.22) ;
- « ny anaran’ny Mpanavotra anay dia Jehovah, Tompon’ny maro, Iray Masin’Israely » (Isa:47:4) ;
- « Ilay Maherin’i Jakoba no Mpanavotra anao » (Isa:60:16) ; sns.
tsy misy « andry » hafa azon’i Joba hanankinana sy hametrahany ny ainy afa-tsy Andriamanitra irery ihany.
Ka ny herin’ny finoany dia namakivaky ny rindrin’ny fisalasalana ny amin’ny fikapohan’ Andriamanitra azy, ka nandia ny lalam-paniriana tsy tanteraka eo amin’ny and.23-24, ho tonga amin’ny tena fahatokiana mafy sy tanteraka.
Nambarany tamin’ny fomba miezinezina ny finoana sy ny fahalalana an’ Andriamanitra ho Mpiaro sy no Mpanavotra azy (and.25-27).
Mampiharihary izany ny filazany fa « velona ny Mpanavotra » azy.
Ny teny hoe chaY (= velona) dia tsy i Joba ihany no mampiasa azy, fa saika ampiarahina matetika ilazana an’ Andriamanitra (Deo.5.23 ; Jos.3.10; 1 Sam.17. 26; 2 Mpanj.19.4; Hos. 2.1).
Manambara izany maha-velona an’Andriamanitra izany ilay tenin’i Jesosy nentiny nandresy lahatra ny Sadoseo fa Andriamanitra sady velona Andriamanitra no Andriamanitry ny velona » (Mat.16.16; Lio.20.37-38 ; 1 Tes. 1.9).
Eo ambonin’ny vovoka ( caphar : tany, vovoka).
Mety ho maro ny dikateny azo raisina. Ohatra : « eo ambonin’ny vovoka » na « eo ambonin’ny fasako » (Cf. 7.21 ; 17.16).
Tsy i Joba no hitsangana any am-parany eto amin’ny and.25 fa « Ilay Goela » : « … ary hitsangana ho farany eo ambonin’ny vovoka Izy».
Ny fanambaran’i Joba izany fanekem-pinoana izany no nampahery azy, ka nahafahany nananatra an’ireo sakaizany mba tsy haharitra amin’ny fanomezan-tsiny azy (and.28-29 ; cf. Job.33.26 ; Sal.12.6 ; Isa.44.6).
Ny filazana ny « vovoka » dia manambara ny fahafatesana (Sal.22.16,30 ; Job. 7.21 ; 17.16 ; 20.11 ; 21.26).
Ny fitsanganana amin’ny maty no tian-kambara amin’izany, ary Andriamanitra no lazain’i Joba fa hitsangana eo ambonin’ny fasany hamoha azy amin’ny torimasony (14.12).
Rehefa niteny tamin’i Joba Andriamanitra tao anatin’ny tafio-drivotra dia nahatsapa i Joba, ka nilaza fa : « fandrenesan’ny sofina ihany no nandrenesako Anao ; fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita Anao » (42.5). Tsy kisendrasendra, fa ny fahatanterahan’izany indrindra, no nilazan’i Paoly hoe : « fa ankehitriny isika mizaha ao amin’ny fitaratra ka tsy mahita marina ; fa rahatrizay dia mifanatrika ; ankehitriny dia sombitsombiny no fantatro ; fa rahatrizay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy » (1 Kor.13.12) ; « fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa » (1 Jao.3.2).